News 18 Nepal || शरीरमा देखिने यी लक्षणले दिन्छन् ठूलो बिरामीको संकेत
काठमाडौं । सामान्यतया हाम्रो शरीरले हामीलाई सम्पूर्ण किसिमका रोगहरुको बारेमा संकेत दिइरहेको हुन्छ । यद्यपि, मानिसहरु त्यसलाई देखेर अथवा थाहा पाएर पनि वेवास्ता गर्छन् । त्यस्ता संकेतहरुमा यदि तपाईंले समयमा नै ध्यान दिनु भयो भने रोग लाग्ने खतरा कम हुन्छ । यद्यपि, त्यस्ता संकेतको पहिचान गरेर तपाईंले आफ्नो स्वास्थका बारेमा अनुमान लगाउन सक्ने कुरामा चिकित्सकहरु समेत सहमत भएका छन् ।
तपाईंले मानिसको उचाई बढेको बारेमा सुन्नु भएको होला, तर के तपाईंले कहिले उचाई घटेको बारेमा सुन्नु भएको छ ? प्राय: मानिस यस बारेमा सोच्दैनन् । तर वास्तवमा हाम्रो उचाई घट्न पनि सक्छ । वास्तवमा हड्डिसंग सम्बन्धित एउटा समस्या छ । हामी यहाँ त्यस्ता थोरै मानिसहरुको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, जसको उचाई प्रोटीन र क्याल्शियम जस्तो महत्वपूर्ण पोषक तत्वको कमिका कारण घट्छ ।
हामीले कतिपय त्यस्ता मानिसहरु देखिरहेका हुन्छौं, जो आफ्नो ओठ सुख्खा भयो भन्दै ओठमा प्राय: लिप बाम लगाइरहेका हुन्छन् । ओठ सधैं सुख्खा भैरहनु कुनै ठूलै समस्याको संकेत हुनसक्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार ओठ फुट्ने समस्या शरीरमा भिटामिनको कमी हुनुका कारणले हुन्छ ।
छालाको गुणस्तरबाट मानिसको स्वास्थ्यको स्तरलाई पहिचान गर्न सकिन्छ । सामान्यतया केही मानिसहरुमा दादको समस्या हुन्छ, यद्यपि छालासंग सम्बन्धित यी समस्याले तपाईं अस्वस्थ हुनु भएको संकेत गर्दछन् । खराब डाइटले तपाईंको छालाको गुणस्तर खराब हुनसक्छ । यदि तपाईंले छालामा केही अनौठा दागहरु देख्नु भयो भने केही कुरा गलत भैरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
मधुमेह (Diabetic) भएकाले के खाने-के नखाने ?
अध्ययनको दाबी, ‘कोरोना संक्रमण निको भए पश्चात समेत रहन्छ यस्तो खतरा !’
कोरोना महामारी भयावह बन्दै : यस्ता छन् निषेधाज्ञाको अनुमान र समाधान
एक अध्ययनको दाबी : यसरी कम गर्न सकिन्छ कोरोना संक्रमणको जोखिम
कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमितमा देखियो यस्तो समस्या
नयाँ स्वरुपको कोरोना भाइरसमा देखिन्छ यस्ता लक्षणहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ- ‘अबका ६३ दिन ज्यादै कठिन, अवस्था सोचेभन्दा फरक भएर जान्छ’
यी हुन् कोरोनाका पाँच खतरनाक लक्षण